Kitts & Nevis Anoramba Kupinda Kune Vafambi vanobva kuBrazil, India, South Africa neUK
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau » Kitts & Nevis Anoramba Kupinda Kune Vafambi vanobva kuBrazil, India, South Africa neUK
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kitts & Nevis inogadziridza kuraira kwayo kwekufamba kwevashanyi vanobva kuBrazil, India, South Africa neUnited Kingdom.
Kitts & Nevis vacharamba kupinda kune vafambi vanobva kuBrazil, India, South Africa neUK.
Zano rekufambisa rakawedzerwa kusvika Nyamavhuvhu 31, 2021.
St. Kitts & Nevis vaenderera mberi nekuwedzera zano rekufambisa kune vafambi vanosvika kubva kuUK, Brazil, India neSouth Africa kubva muna Chikunguru 19, 2021 kusvika Nyamavhuvhu 31, 2021. Vanhu vanobva kunzvimbo dzataurwa pamusoro apa vanokurudzirwa kuti varege kuenda kuSt. & Nevis panguva ino. Kupinda muFederal kucharambwa. Vagari uye Vagari veSt. Kitts & Nevis vari kusvika kubva kune chero nyika idzi vanofanirwa kugadzirisa chikumbiro chavo chekufamba kuburikidza nepuratifomu yepamhepo. www.knravelform.kn.
Avo vakabaiwa jekiseni zvizere kwemavhiki maviri kana kupfuura vasati vasvika vachazodikanwa kuti vagare vega kwemazuva mana (4) vasvika uye vakamirira yakaipa RT-PCR Bvunzo yakatorwa pazuva rechina (4), vasati vasunungurwa kubva kuiswa kunzvimbo yausingasangani nevamwe. Iwo maCitizen neVagari vasina kunyatsobaiwa jekiseni kwemavhiki maviri vasati vasvika vachazodikanwa kugara kwavo vega kwemazuva gumi nemana pakusvika.
Sarudzo yekuwedzera kuraira inoenderana nezano reMinistry of Health uye yakadzikwa neHurumende yeSt. Kitts & Nevis kuburikidza neNational COVID-19 Task Force mukufarira kuchengetedza miganhu yayo uye hutano hwevagari vayo. Hurumende iri kuwedzera kuraira mukupindura COVID-19 misiyano yakatanga kuUK, Brazil, South Africa neIndia.
Kunyanya kunetseka panguva ino ndiko kusiyana kweDelta. Iyo Federation yeSt. Kitts & Nevis ichaenderera ichiona mamiriro ari kuitika uye ichapa zvidzoreredzo maererano.
Vafambi vanofanirwa kugara vachitarisa iyo Kitts Tourism Authority uye Nevis Tourism Chiremera mawebhusaiti ekuvandudza uye neruzivo.